फेरी घट्यो फेवातालमा यस्तो घटना, एक महिला यस्तो अवस्थामा (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फेरी घट्यो फेवातालमा यस्तो घटना, एक महिला यस्तो अवस्थामा (भिडियो)
कास्की । पोखरामा पछिल्लो समय आत्महत्याका कारण ज्यान जानेको संख्या बढ्दै गएको छ । विशेषतः पोखराको सेती नदी र फेवाताल लगायत बेगनास तालमा यस्ता अकल्पनीय घटनाहरू हुँदै आएका छन् ।
गत हप्ता मात्र पोखराको बेगनास तालमा डुङ्गा डुब्दा ८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने फेरी आज पोखराको रातोपैह्रा २५ वर्षीया महिलाको शब फेला पर्यो ।
फेवातालमा पुम्दीभुम्दीकी युवतीले हामफालेर ज्यान गुमाएको एक महिना हुन नपाउँदै फेरी फेवा तालको नहरमा अर्की महिलाको शब फेला पारेको छ ।